musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bulgaria Kuputsa Nhau » Vanhu makumi mana nevashanu vakafa mutsaona yebhazi rekushanyira muBulgaria
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sekureva kwenhau dzeBulgaria, vese makumi mashanu vaive zvizvarwa zveAlbania, nepo vatyairi vese vaive nemapasipoti ekuNorth Macedonia.
Bhazi revashanyi rine marezinesi eNorth Macedonia rikarovera kumadokero Bharugeriya highway.
Bhazi, iro rakanyoreswa kuNorth Macedonia, raibva kuIstanbul kuenda kuSkopje.
Sekureva kwemukuru weBulgaria Interior Ministry, Nikolai Nikolov, vanhu vanosvika makumi mana nevashanu, kusanganisira vana vakati wandei, vakaurayiwa mutsaona inotyisa yakaitika mambakwedza eChipiri, nenguva dza45am nguva dzemuno.
Vana gumi nevaviri vakafa mutsaona, Bulgarian media yakashuma. Mamwe mashoko anoti vanhu makumi mana nevatanhatu vakaurayiwa.
Vapukunyuki vashoma, vamwe vakatsva zvakaipisisa, vakaendeswa kuchipatara muguta guru reBulgaria, Sofia.
Mukuru wechikamu chekutsva kwechipatara ichi, VaMaya Argirova, vanoti vamwe vanhu vakakuvara vachisvetuka nepamahwindo apo vachiedza kutiza mubhazi.
Chikonzero chetsaona iyi hachisati chazivikanwa.
Mubhazi maiva nevanhu makumi mashanu nevaviri. Sekureva kwenhau dzeBulgaria, vese makumi mashanu vaive zvizvarwa zveAlbania, nepo vatyairi vese vaive nemapasipoti ekuNorth Macedonia.
BharugeriyaGurukota rezvemukati menyika Boyko Rashkov akati njodzi "inotyisa" ichaongororwa.